Xildhibaanada Baarlamaanka Sweden oo mushaarka loo siyaadiyay | Somaliska
Mudanayaasha ku jira baarlamaanka Sweden (Riksdagen) ayaa mushaarkii loo kordhiyay ka dib markii uu heerka nolosha ee Sweden kor u kacay. Mudanayaasha baarlamaanka ayaa mushaarkooda lagu daray 1300kr iyagoo hada qaadan doona 58 300kr bishii.
Marka loo barbar dhigo wadamo badan ayay mudanayaasha baarlamaanka Sweden qaataan mushaar ka yar dhigooda. Balse saas oo ay tahay ayaa dadka qaarkood qabaan in mushaarka laga yareeyo mudanayaasha baarlamaanka.
Si kastab ha ahaatee, lacagtaan ayaa la dhihi karaa waa mid ku filan iyadoo qaar ka mid ah xildhibaanada ay horay u ahaayeen arday. Baarlamaanka ayaa dib loo soo dooran doonaa sanadka 2014.
Abbas Sharif says:
waan ku faraxsanahaay qiimayntaaaan aaad samaaynnaysaaan….
Asc jimcaale waa wax fican anigane hadan. Ku weydiiyo anagane dadka arbetaförmedligen lacag ma loogu darayo miyaaa SAS ayaan maqlee tack
wallalo salam mida hore , mida xigta waxan raba ina ku waydiyo dadka sharciga no didey ee didmoyinka la sisey maxa war cusub ka haysa walalo fadlan warka noso radi aado rali ah
asc aad ayan kuu salamay walalkey salan kadib waxan ku wey diina waxaa hada ka hor soo qortay in qofka heysto pasaborka reasaducumint. 5 sano kadib anan loo badaleyn maxuu sameyna sxb adiga oo mahadsan iiga soo jawaab wabilaahi towfiq